Kaararka SD SanDisk waa mid ka mid ah ugu wanaagsan ee kaararka SD iyo DSLR saarayaasha oo la hubiyo in adeegyada fasalka oo tayo sare leh waxaa la siiyaa dadka isticmaala ku. SanDisk waa Dhuxul aaminsantahay ee warshadaha iyo sabab la mid ah waxaa loo arkaa in ay tahay doorasho sare ee isticmaala ka adduunka oo dhan.
Xogtaasi la tirtiro ama lumay kaarka SanDisk
Waa mid ka mid ah sababaha ugu badan oo keeni in arrimaha dadka isticmaala iyo resultantly iyagu ma ay awoodaan in ay isticmaalaan kaararka SanDisk la heerka ku qanacsanaanta ee ay la soo saaray. Waxaa sidoo kale in la xuso in ay jiraan tobanaan kun oo barnaamijyo software soo kabashada oo dabooli ma aha oo kaliya SanDisk, laakiin mid kasta oo kaarka kasta oo adduunka marka ay timaado soo kabashada xogta. SanDisk The Sidaa darteed waa in la marsiiyey la software ugu wanaagsan ee la heli karo ee arrintan la xiriira oo waa hubaal ma noqon freeware ah oo dhan sida barnaamijyada software-kabashada xogta freeware marnaba shaqayn haba yaraatee. Sidaa darteed waa in user lagu qaatay lacag si aad u hesho barnaamij software oo ma aha oo kaliya helo user la casriyaynta free uu nool yahay, laakiin sidoo kale siinayaa qiimaha buuxa ee lacag si user ah. SanDisk waa magaca oo magdhow ee dunida ka mid ah kaararka SD iyo SD micro oo sidaas daraaddeed xaalada ayaa ah mid dhif wajahay laakiin haddii ay tahay kiiska ka dibna barnaamijka oo waa in la isticmaalaa waa dhigma heerka heer sare ah kaarka SanDisk ah si loo hubiyo in xogta ay tahay baxey kaasoo sida iska cad waa mid aad muhiim u ah dadka isticmaala ay. Software ciliyaan sidoo kale hubin doona in haddii ay jirto waqti soo socda ka dibna barnaamijka in si gaar ah loo isticmaalo si ay u hubiyaan in user helo natiijada la doonayo iyo macaamiisha ah ayaa sidoo kale uu noqonayaa danjiraha brand aan tooska ahayn ee soo saaraha software ah.
3 talaabooyin fudud inuu ka soo kabsado files ka card SanDisk ah
Iyo sidoo kale khadka sakhiray soo jeedinaya tutorial ah waxay tilmaamaysaa mid ka mid ah barnaamijyada software ugu fiican marka ay timaado soo kabashada xogta iyo waxaa loo magacaabay Wondershare Data Recovery oo la soo saaro by Wondershare Inc. si loo hubiyo in user helo ugu fiican iyo gobolka adeegyada tahay in arrintan la xiriira ka. Feature ugu weyn ee barnaamijka waa keenaysay ku dual hab oo sidaas awgeed ay si siman isticmaali karo fasalka kasta oo user iyo sidaa darteed diinta iyo wax kaqabashada xogta la sameeyo hab ugu fiican. Waxaa sidoo kale ku taliyey in dadka isticmaala ay u marnaba dajiyo barnaamij ku saabsan disk isla meesha wax kaqabashada xogta loo baahan yahay sidii ay overwrite doonaa xogta iyo sidoo kale hubin doona in waxkaqabasho marna sameeyo hab loo baahan yahay. Rating guud ee barnaamijka waa 5 out of 5, taas oo ka dhigaysa in a waa in uu leeyahay user computer kasta sida soo saaro karo xogta ka mobile kasta, PC iyo laptop aan arin kasta.
Geedi socodka waa in la raaco si loo isticmaalo barnaamijka dib u soo ceshano files ka kaadhka xusuusta kamarada waa sida soo socota:
1. Akhristaha kaarka kaarka waa in lagu rakibaa galay dekedda USB nidaamka ah:
2. URL ayaa http://www.wondershare.com/data-recovery/guide.html waa in la browsed soo bixi file exe barnaamijka iyo mar sameeyo waa in lagu xiro in aan bilowno barnaamijka:
3. Nooca file waa in la raadsan waa in markaas la soo xulay:
4. meesha user uu doonayo barnaamijka si ay u baadhaan waa ka dibna in la cayimay mid kastaba:
5. soo kabsado files yihiin markaas in loo arko in la hubiyo in kuwa la doonayo waxaa la soo xulay oo user helo files ka soo kabsaday adigoo riixaya badhanka soo kabsaday. Waxaa sidoo kale in la xuso in nidaamka la joojin doonaa mar files ah ayaa la helay:
Taageerayaan SanDisk kaararka barnaamijkan
Wondershare Data Recovery Waa barnaamijka ugu wanaagsan ee taageera tiro balaadhan oo ah kaararka xusuusta si aad u hubiso in natiijada ugu wanaagsan waxaa lagu helaa. Kaararkan xasuusta SanDisk in ay yihiin kuwo la socon kara waa sida soo socota:
2. kaararka xusuusta SanDisk SDXC
4. SanDisk 32 iyo 64 GB SD micro
Liiska uu soo kor ku xusan ma xaqiiqdii waa dhameystiran iyo inay ku rid toosanna ku Wondershare Data Recovery taageero iyo retrieves xogta ka kaarka wax xasuus ah oo ay software waa toos ah wajahan. Waa feature in barnaamijka taas oo mid ka mid ah xulashada ugu wanaagsan ee dadka isticmaala ay ka dhigaa.
Noocyada SanDisk Card
Ka dib markii qaar ka mid ah noocyada kala duwan ee kaararka SanDisk iyo diinta ayaa sidoo kale ku xusan iyaga ka gees ah si ay u hubiyaan in user helo aragti fiican oo ku saabsan mawduuca in sida uga wanaagsan ee suurto gal ah:
• SanDisk ba'an UHS-waan microSDXC PRO Card 64 GB
Kaarka waxaa si gaar ah loo isticmaalo sida qalabka lagu kaydiyo multimedia ah.
• SanDisk ba'an UHS-waan microSDHC PRO Card 32 GB
Kaarka waxaa loo isticmaalaa in uu kaydiyo oo diiwaan bandhigyo ee heer shirkadaha.
• SanDisk ba'an UHS-waan microSDHC PRO Card 16 GB
Waa kaadh oo loo isticmaalo ee telefoonada gacanta si ay xogta lagu kaydiyo.
• Kormeerka SanDisk High dulqaadasho Video microSDHC iyo microSDXC Memory Card 64 GB
Sida magacaba ka muuqata, videos ballaaran iyo bandhigyo lagu kaydin yaabaa isticmaalaya kaarka this.
• SanDisk ba'an PLUS microSDHC UHS-waan Card for Action Kaameerada 32GB
Kaarka ayaa si gaar ah u dhisay isticmaalka camera oo sidaas daraaddeed natiijada ugu wanaagsan loogu balan qaaday.
• 16GB kaadhka xusuusta SanDisk microSDHC
Waa kaadh in la soo saaro isticmaalka maalin kasta. Waxaa loo isticmaali karaa in kaamirooyinka ay taageerayaan iyo Qalabka telefoonada gacanta ama labadaba sida hawadooda user.
• SanDisk UHS-waan microSDXC Ultra Card u Kaameerada 64GB
Sida magacaba ka muuqata kaarka la soo saaro isticmaalka in kaamirooyinka oo kaliya. Sawirada qeexitaanka sare iyo videos ayaa sidoo kale waxa lagu kaydin karaa si fudud oo ku qanacsan.
Mar kale liiska aysan halkan ku dhamaan oo dhan sida SanDisk leeyihiin kaararka kale sameeyay sida fiican u qaban shaqada. Waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in URL http://www.sandisk.com/products/memory-cards/microsd/ waxaa soo booqday wixii faahfaahin ah iyo tilmaamaha la xiriira arrintaas.
> Resource > Memory Card > Habka ugu fudud ee inuu ka soo kabsado xog ku saabsan kaarka SanDisk